[Chuncheon #Suhanye A Duplex Indawo yokuhlala yaBucala]*(Terrace Barbecue) *(Bulmung)*(I-duplex ephangaleleyo)*(Indawo yokuhlala enelayisensi esemthethweni)
Dong-myeon, Chuncheon, Gangwon Province, South Korea
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe ongu연정
I-"Suhanye" yethu yindlu yeendwendwe enelayisensi esemthethweni.
Yindlu enemigangatho emibini "yindlu enye" eseDong-myeon, eChuncheon. (Ukubulala iintsholongwane kugqitywa yonke imihla.)
Ndiyathemba ukuba unokuhlala ukhululekile kwaye uphumle kubomi bakho bemihla ngemihla obudinisayo.
Ndiyathemba ukuba uza kuba nexesha elimnandi kunye nebarbecue kunye nomlilo ngaphandle.
Sinomdla kwizinto zangaphakathi zakudala, ngoko ke ingaphakathi lehotele
Zonke izinto zangaphakathi zihonjiswe ngesitayile sakudala ~!
Ukuba ushiya ngokutsha kwi SNS (review Airbnb, blog, Instagram, Naver, njalo njalo), siza kukunika sakusasa elula (isonka nekofu). Hayi
(Lusuku olunye kuphela olubonelelwa ngobusuku obulandelelanayo)
Ndiyakuthanda ~ Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe kuphela kwizinja ezincinci! (Iindleko ezongezelelweyo ze-KRW 15,000)
Iindleko zeBarbecue (i-20,000 iphumelele abantu aba-4 okanye ngaphantsi, i-30,000 iphumelele abantu aba-5 okanye ngaphezulu)
Bulmong (15,000 iphumelele kuquka iinkuni)
Ngokomgaqo-nkqubo karhulumente, siyakujoyina ekugcineni inani lemithetho yokuvalelwa ngenxa yeCorona. Nceda uqonde ukuba ugcino luza kurhoxiswa ukuba inani labantu lingaphezulu kwemithetho yokuvalelwa.
Indawo yethu yokuhlala "yindawo yokuhlala yosapho olunemigangatho emibini" ebekwe eDong-myeon.
Ndirhola yonke imihla.
Kukho indawo yokupaka eyaneleyo.
Kukho indawo yokosa inyama kunye neyadi encinci ngaphandle kwendlu.
Umgangatho wokuqala unegumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela.
Umgangatho we-2 unegumbi lokulala elikhulu (iikumkanikazi ezi-3)
Ngokungafaniyo ne-duplex kwezinye iindawo zokuhlala, ukuphakama komgangatho kuphezulu.
INetflix ifakwe kwiTV.
"Isicoci somoya" sinikezelwe.
Nxiba njengomntu omtsha xa uphuma kwigumbi!
Ukuba ushiya uphononongo lwe-SNS (uphononongo lwe-Airbnb, ibhlog, ikhefi, i-Instagram, njl.)
Kunikiwe isidlo sakusasa esilula (isandwich kunye nekofu) (Nceda ubonise "isicelo sophononongo" xa ubhukisha.
I-air conditioner kunye nesicoci samanzi zifakwe.
Izibonelelo zeBBQ zangaphandle ziyafumaneka ^^ (Web Grill)
(4 abantu okanye ngaphantsi 20,000 won, 5 okanye ngaphezulu abantu 30,000 won) -Payment kwisiza
I-Barbecue yi-grill yegesi Zonke izixhobo eziyimfuneko zilungisiwe, ngoko kufuneka ulungiselele kuphela into ofuna ukuyidla.
Ungayisebenzisa phambi kwe-10pm.
(Ungayenza kade ukuba akukho ngxolo ininzi! ~)
Ebusika, iplastiki ilungisiwe, kodwa njengoko iyi-barbecue yangaphandle, ingabanda, ke qiniseka ukuba unxibe iimpahla ezishinyeneyo!
Kulabo bafuna indawo yokucima umlilo yangaphandle, siya kubonelela ngeenkuni ngentlawulo eyongezelelweyo ye-15,000 ephumelele kuphela kwabo basebenzisa i-barbecue~^^
Ngokuqinisekileyo akukho kutshaya ngaphakathi ~~ Nangona kunjalo, ukutshaya kuvunyelwe kwi-terrace yangaphandle!
Ndiyakuthanda~ Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe kuphela izinja ezincinci ~! Sikwanazo nezilwanyana zasekhaya, ngoko ke siwuqonda ngokupheleleyo umnqweno wokuhlala nezilwanyana zasekhaya, ke senze ukuba kube nokwenzeka ukuzisa izilwanyana zasekhaya kunye nathi ~!
Nangona kunjalo, ekubeni indawo yethu yokulala ingeyondawo yokulala ekhethekileyo yezinja, yindawo yokulala eqhelekileyo enezinja, ngoko ke kufuneka ubeke ingqalelo ekhethekileyo kucoceko lwezinja zakho.
Umrhumo wesilwanyana songeziweyo wongezwa (i-15,000 iphumelele ngobusuku) kwaye kuphela intlawulo ye-site kunye nokudluliselwa kwebhanki kunokwenzeka. Izilwanyana zasekhaya kufuneka kuqhagamshelwane nazo ngexesha lokubhukisha.
Iipads kunye nezixhaso zezinja azilungiswanga, ke qiniseka ukuba uzizise!
(Besinabathengi abambalwa abanezilwanyana zasekhaya, kodwa enkosi ngokuyisebenzisa ngokucocekileyo ~!)
Mart (ms bezirhwebisana), ehlathini amancinane (eHamburg inyama, inyama yehagu cutlet, njalo-njalo), yokutyela dakgalbi (dakgalbi emnandi), kunye edumileyo yokutyela makguksu (Samgyori makguksu) ngaphakathi uhambo lwemizuzu eli-15 (imizuzu emi-5 ngemoto). Kwaye kukho yicafe yegumbi lokudlala (INdawo eZimbini) ~
Kukho i-ms mart ekufutshane. Yindawo enkulu entle yentengiso, ngoko ilungile ekuthengeni.
Kukho iindlela ezilungileyo zebhayisekile ngeenxa zonke!
Sirenta iibhayisekile simahla!
Umatshini womdlalo wangaphakathi ngumatshini womdlalo wasimahla.
Inani eliphezulu labantu li-6, kodwa nje ukuba umthengi akakhululekile, abantu abangaphezu kwe-6 banokwenzeka.
Ewe, zikhona izindlu zangasese zangaphakathi, kukho nezangaphandle.
4.95 · Izimvo eziyi-387
I-skywalk yimizuzu emi-5 ukusuka eSoyang-ro, kwaye indawo ejikelezileyo isondele kwindlela yebhayisekile.
Zininzi iindawo zokutyela ezijikelezileyo ~ (Ihlathi eliNcinci, iDakgalbi emnandi, iGubongsan Starbucks, iSamgyo-ri Dongchimi Makguksu, njl.njl.)
Umbuki zindwendwe ngu- 연정
Ukuba undithumelele umyalezo, ndiza kuqhagamshelana nawe kwangoko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dong-myeon, Chuncheon